Macaamiisha Elektaroniga - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Guddiyada elektarooniga macaamiisha
Fumax waxay bixisaa guddi elektaroonik ah macaamiil lagu kalsoonaan karo & waara.
Elektiroonigga macaamiisha waa shey maqal iyo muuqaal ah oo laxiriira raadiyaha iyo telefishanka oo ay adeegsadaan shaqsiyaadka iyo qoysaska.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin looxyada macaamiisha korantada
Maxay ku jiraan guddiyada macaamiisha korantada?
Qalabka TV-ga, qalabka fiidiyowga (VCD, SVCD, DVD), duubiyaasha fiidiyowga, kaamirooyinka, raadiyeyaasha, duubiyaasha, ku hadalka combo, ciyaartooyda diiwaanka, ciyaartooyda CD, taleefannada, kombiyuutarada shaqsiga ah, qalabka xafiiska guriga, qalabka caafimaadka elektarooniga ah ee guriga, elektarooniga baabuurta, iwm.
Muhiimadda horumarinta looxyada elektarooniga macaamiisha
Macaamiisha, adeegsiga alaabada elektaroonigga ah waxay gacan ka gaysatay hagaajinta raaxada iyo raaxada nolosha, kordhinta baashaalka iyo hagaajinta tayada nolosha, sidaa darteed waxay qayb muhiim ah ka noqotay nolosha dadka casriga ah.
Awoodda looxyada macaamiisha korantada:
Dhumucda Maarta: 0.1mm, 0.2mm
Dhumucdiisuna Board: 0.21mm-7.0mm
Min. Cabirka Daloolka: 0.1mm
Min. Ballaca Khadka: 0.1mm
Min. Khadka Safka: 0.1mm
Dhameystirka Dusha: Immersion Au
midab: casaan / buluug / cagaar / madow
Nooca: Golaha PCB elektarooniga ah
Qalabka: FR4 CEM1 CEM3 Hight TG
Heerka PCB: IPC-A-610 E
Adeeg: Halbeegga 'Stop Stopkey' oo ay ku jiraan Firmware
Midabka maaskaro aad u liidato: Caddaan Madoow Jaalaha Cagaar Cas
Shayga: Keyboard PCB Assembly
Lakabka: 1-24 lakab
Isbedelka horumarka ee looxyada macaamiisha korantada:
Marka laga qiimeeyo isbeddelka horumarka ee alaabada elektaroonigga ah ee sanadkan, muuqaalka ugu muhiimsan ayaa ah in alaabooyinka ay sii kordhayaan caqliga. Mawjadaha sirdoonka ayaa noqday is afgarad warshadeed iyo jihada isbedelka.